အယ်လ်ထ ရာဆောင်း ရိုက်ခြင်း-MamyPoko Myanmar
အယ်လ်ထ ရာဆောင်း ရိုက်ခြင်း
အယ်လ်ထ ရာဆောင်း ရိုက်ခြင်း ဆိုတာ?
စီနီယာ မိခင်များ ဆီမှ ဗိုက်ထဲ မှာပဲ ရှိသေးသည့် ကလေး ငယ်၏ အယ်လ်ထ ရာဆောင်းနှင့် ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံကို
ပထမ အကြိမ် စစ်ဆေး မှုခံ ကတည်းက အယ်လ်ထ ရာဆောင်း ရိုက်၍ စစ်နိုင် ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း၌ ရှိသော ကလေး ငယ်၏ ကြီးထွားမှု အခြေ အနေ၊ ကျန်းမာရေး အခြေ အနေ၊ အမေ့ ဗိုက်ထဲမှ အခြေ အနေကိုပုံရိပ်ဖြင့် စစ်ဆေး နိုင်သည့် နည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။
အခု တလောမှာ အယ်လ်ထ ရာဆောင်း ရိုက်သည့် နည်းပ
ညာသည် အရမ်းကို တိုးတက် လာပြီး စစ်ဆေး ပုံစစ် ဆေးနည်း၊ ပုံရိပ် ပေါ်ပုံ ပေါ်နည်း၌ မူတည်၍ အမျိုး အစား အားဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိပါသည်။
ဓာတ်ပုံပံ့ပိုးပေးမှု: Inoue Ladies Clinic
အယ်လ်ထ ရာဆောင်း စက်သည် ငါးအုပ် များကို ရှာဖွေသည့် စက်နှင့် ဥပမာ ပေးလို့ ရပါသည်။ မြင့်မားသည့်
အကြိမ် အရေအတွက် ရှိသည့် အယ်လ်ထရာ ဆောင်းလှိုင်း
သည်အရည် ထဲကို ဖြတ်လျှင် ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်း အဂါင်္နှင့် တစ်ရှုး အစွန်း များမှ နေပြီး ရောင်ပြန် ဟပ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်
ရှိပါသည်။ ထိုအ ရာကို ပင်လယ် ထဲ၌ အသုံး ပြုခြင်းက ငါးအုပ်ရှာ ဖွေသည့် အရာ ဖြစ်ပြီး၊ အရည်ဖြင့် ပြည့်နေသော
အမေ့ ဝမ်းဗိုက်၌ အသုံ ပြုခြင်းက ကိုယ်ဝနု ဆောင်ချိန် စစ်ဆေးသည့် အရာ ဖြစ်ပါသည်။
ရောင်ပြန် လှိုင်းအား ပုံရိပ် တခု အနေဖြင့် ကူးယူ ကြည့်နိုင် သောကြောင့် မော်နီ တာဖြင့် စစ်ဆေး နိုင်ခြင်း၊ ပရင့် ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ ဆေးရုံပေါ် မူတည်ပြီး ဗီဒီယို ကူးယူ ရရှိနိုင်မှု များလည်း လုပ်နိုင် ပါသည်။ အယ်လ်ထ ရာဆောင်း ရိုက်ခြင်းသည် X-rays ကဲ့သို့ ကိုယ်ဝန် သည်အား ဘေးထွက်
ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာမျိုးမ ရှိပဲ အရမ်းကို စိတ်ချ ရသည့် စစ်ဆေးမှု နည်းလမ်းလို့ ပြောလို့ ရပါသည်။
အထား အသို ပေါ်မူ တည်သော အမျိုး အစား
ခန္ဓာကိုယ် ထဲထည့်ပြီး ရှာဖွေသော ကိရိယာ ဖြစ်သည့် အချောင်း ပုံသဏ္ဍာန် ရှိသော အသံလှိုင်း လွှင့်သည့် ကိရိယာကို မိန်းမ ကိုယ်အဂါင်္ ထဲသို့ ထည့်သွင်းပြီး စစ်ဆေးသော နည်းလမ်း။
ကိုယ်ဝန် ၁၁-၁၂ ပတ်လောက် အထိက ဤနည်း လမ်းကို
အသုံး ပြု၍ အဓိက ကတော့ ပထမဆုံး စစ်ဆေး မှုက စပြီး
အယ်လ်ထရာ ဆောင်းရိုက် ခြင်းကို ပြုလုပ် ကြပါသည်။ မိန်းမ အဂါင်္ထဲ ထည့်ခြင်းဖြင့် ဝမ်းဗိုက် ထဲ၌ ရှိသော ကလေး
ငယ်အား အနီး ကပ်ဖြင့် သားအိမ် အတွင်း ပိုင်းကို လေ့လာ နိုင်သောကြောင့် ပုံရိပ် အသေး စိတ်ကိုလည်း သေချာစွာ စစ်ဆေး နိုင်ပါသည်။ ကလေး ငယ်၏ အခြေ အနေတင် မဟုတ်ပဲ မိခင်၏ သားအိမ်နှင့် မျိုးဥအိမ် ကျန်းမာရေး ကိုလည်း ဆေးစစ် နိုင်ပါသည်။ စိတ်အေး သက်သာ စွာဖြင့်
စစ်ဆေးမှု ခံယူလျှင် နာကျင် မှုကို မခံစား ရပေမဲ့လည်း စိတ်လှုပ်ရှား မှုကြောင့် အားတင်း ထားလျှင်မိန်းမ အဂါင်္ထဲ ထည့်သည့် အချိန်၌ နာကျင် မှုကို ခံစား ရသည် များလည်း ရှိသောကြောင့် အဲ့ဒီလို ဖြစ်လျှင် ဆရာ ဝန်အား အမှန် အတိုင်း ပြောကြ ရအောင်။
ဤကိရိ ယာသည် သုံးပြီးတိုင်း ပိုးသတ် ထား၍ သီးသန့် ကွန်ဒုံး၌ စွပ်ပြီး အသုံး ပြုခြင်းကြောင့် သန့်ရှင်း မှုအတွက် ကိုလည်း စိတ်ချ ရပါသည်။
စစ်ဆေးမှု ပေါ်မူ တည်သော အမျိုး အစား?
2D အယ်လ်ထရာဆောင်း ဓာတ်ပုံ
အယ်လ်ထ ရာဆောင်း လှိုင်း၏ ရောင်ပြန် ကနေ ရရှိသော အချက် အလက် များကို မျက်နှာပြင် ပုံရိပ် အနေဖြင့် ဖော်ပြသည့် အရာ ဖြစ်ပြီး အသုံး ပြုသူ များသည့် နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။
ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်းထည့် စစ်ဆေးသော နည်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ် ပြင်ပ၌ စစ်ဆေး သောနည်း ဆိုပြီး ရှိပါသည်။
အယ်ထရာဆောင်းရိုက်ခြင်းကြောင့်သွေးစီးဆင်းမှုပမာဏ၊ မြန်နှုန်းကိုတိုင်းတာနိုင်၍ကလေးချက်ကြိုး၏သွေးကြောမျှင်အရေအတွက်၊နှလုံးပုံသဏ္ဍာန်ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။
3D method*Transabdominal method
3D အယ်လ်ထရာဆောင်းဓာတ်ပုံ တကယ်ကိုပြူတင်းပေါက်မှချောင်းကြည့်နေသလိုသုံးဖက်
4D နည်းလမ်း ※ Transabdominal method
3D နည်း၌ အချိန် ကြာမြင့်မှု အပြင် လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ် အဖြစ်
လုပ်ထားခြင်း၊ ကလေး ငယ်သည် သန္ဓေ သားအား ဝန်းရံ ထားသော အရည် ထဲ၌ တကယ့်ကို အာကာသ ထဲ၌ သက်တောင့် သက်သာဖြင့် လမ်းလျှောက် နေသ လိုမျိုး မြင်ကွင်းကို စိတ်လှုပ်ရှား ဖွယ်မြင် တွေ့ရမှာပါ။
ကလေး ငယ်၏ ကြီးထွား မှုအား စစ်ဆေး နိုင်ခြင်း၊ မိခင်၏
သားအိမ်၊ မျိုးဥအိမ် အခြေ အနေ များကို စစ်ဆေး ဖို့ရန် 2D နည်းလမ်း ဖြင့်လည်း လုံလောက်သည့် အတွက် 3D,4D ရှိနေ ပေမဲ့လည်း စစ်ဆေးမှု မလုပ်ပဲ ဆန္ဒ ရှိသော သူများ ကိုသာ စစ်ပေးသည့် နေရာ အတော် များများလည်း ရှိပါသည်။
အယ်လ်ထ ရာဆောင်း အကြိမ်ရေ?
ဤသည်လည်း ဆေးကုသ ဝန်ဆောင်မှု ပေါ်မူတည် ပင်မဲ့
အယ်ထရာ ဆောင်းရိုက် ခြင်းသည် အကုန် အကျ များခြင်း
ကြောင့် အမြဲတမ်း ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု သွားလုပ်နေ ရသည့် သားဖွား ဌာနလည်း ရှိသလို၊ လိုအပ်မှု ပေါ်လိုက်ပြီး ၂ကြိမ် ၃ကြိမ် ရိုက်ပေးသော နေရာ များလည်း ရှိပါသည်။
အယ်လ် ထရာဆောင်း ရိုက်ခြင်းဖြင့် ဘာသိ နိုင်သလဲ?
3D,4D အယ်လ်ထ ရာဆောင်း ဆိုရင်ဖြင့် ကလေး ငယ်၏
ပုံသဏ္ဍာန် သည် အမှန် အကန် ဖြစ်၏။ သားအိမ် အတွင်း ရှိနေသော ပုံရိပ် ဆိုတာ မယုံကြည် နိုင်လောက် အောင်ပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမျိုး မိခင်၏ ဝမ်းဗိုက် ထဲ၌ ရှိသော ကလေး ငယ်၏ ပုံရိပ်အား ကြည့်ရှု ခြင်းသည် ဘယ်လို ကိစ္စကို သိရှိရန် အတွက် ပါလဲ?
မိခင်၏ ကျန်းမာ ရေးအား စစ်ဆေးခြင်း
ပထမဆုံး မိခင်၏ သားအိမ်နှင့် မျိုးဥအိမ် အခြေ အနေကို စစ်ဆေး နိုင်ပါသည်။ ပထမ အကြိမ် စစ်ဆေးသည့် အဆင့်တွင် သားအိမ် ပြင်ပ ကိုယ်ဝန် တည်နေခြင်း ရှိမရှိ၊ မျိုးဥအိမ် ပုံမှန် ဟုတ်မဟုတ်၊ ကိုယ်ဝန်၌ ပြဿနာ ရှိမရှိ တို့အား သေချာစွာ အတည် ပြုရန်၊ အရေး ကြီးသော
ဆုံးဖြတ် ချက်ချရန် အတွက် မရှိ မဖြစ်သော စစ်ဆေးမှု ဖြစ်ပါသည်။ မိခင်၏ ကျန်းမာ ရေးကို သိရှိ ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ဝန် ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးသည့် အခြေ အနေ မှာပင် အချင်းတိုင် တဝိုက် အစရှိ သည်တို့၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေး မှုများ ၌လည်း အသုံးဝင် ပါသည်။
ကလေး ဘယ်လို ကြီးထွား သလဲ ဆိုတာ သိရှိ ခြင်း
အရေးကြီး ဆုံးသော ရည်ရွယ် ချက်သည် ကလေး ငယ်လေး
ချောချော မောမောဖြင့် ကြီးပြင်း နေလား ဆိုတာကို စစ်ဆေး ခြင်း ဖြစ်သည်။ အမြွှာလား ကလေးက ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေလား သိနိုင်တာ တခုထဲ မဟုတ်ပဲ ကလေး၏ ပုံသဏ္ဍာန် ပေါ်မူ တည်၍ အမျိုး မျိုးသော အစိတ် အပိုင်း များ၏ အရှည်နှင့် အရွယ် အစား ကိုလည်း တိုင်းတာ နိုင်ပါသည်။ မွေးဖွားမည့် ရက်ကို အတည် ပြုနိုင်ရန် အတွက် ""crown-rump length"" လို့ခေါ်သည့် ခေါင်းမှ တင်ပါးထိ
အရှည်၊ ဦးခေါင်း အချင်း၊ ပေါင်ရဲ့ အရိုး အရှည်၊ ဝမ်းဗိုက် တဝိုက် ၏ဆိုဒ်၊ အစရှိ သည်တို့အား အသေးစိတ်တိုင်းတာ
သွားမည်။ တဖန် ကိုယ်ဝန် ၂၄ပတ် ဆိုရင် ယောကျားလေး၊ မိန်းကလေး ခွဲခြားမှု ပါသိရှိ လာမည်။ ဒါပေမဲ့ ကျားမ သတ်မှတ် ဆုံးဖြတ်ဖို့ အတွက် စစ်ဆေးခြင်း မဟုတ် သောကြောင့် မပြော ပြသည့် သားဖွား ဆေးရုံလည်း ရှိပါသည်။
ကလေး၏ ကျန်းမာ ရေးကို နားလည်ခြင်း
Color Doppler နည်းလမ်းဖြင့် ကလေး၏ သွေးလည် ပတ်မှု
အခြေ အနေကို သိသည့် အတွက် ကိုယ်အဂါင်္ တခု ချင်းစီ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ၊ ချက်ကြိုး၏ အခြေအနေ၊ နှလုံး ပုံမှန် ဟုတ်မဟုတ် အစရှိ သည်တို့အား ရှာဖွေကြည့် နိုင်သည်။ တဖန် ဝမ်းရည် ပမာဏ၊ အချင်း အနေ အထား၊ ချက် အခြေအနေ မှလည်း မွေးဖွားသည့် အခါ၌ ဆိုးကျိုး ဖြစ်စေသည့် အချက် အလက် များကို စောစီးစွာ တွေ့ရှိနိုင် ပေမဲ့လည်း အမြင်ဖြင့် စစ်ဆေး ခြင်းနှင့် သိပ္ပံ နည်းဖြင့် စစ်ဆေး ခြင်းသည် မတူညီ သောကြောင့် အခြေ အနေ အားလုံးကို ရှာဖွေ တွေ့နိုင် မည်လို့တော့ မဆို နိုင်ပါဘူး။
အယ်လ်ထ ရာဆောင်းဖြင့် ဗိုက်ထဲ၌ ရှိနေသော ကလေး လေးကို ကြည့်နိုင် ခြင်းသည် အရမ်းကို လျှို့ဝှက် ဆန်းကြယ် ပါသည်။ ထိုအ ရာသည် အမေ တယောက် အနေဖြင့် ကလေးနှင့် တွေ့နိုင်သော ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံ၊ အမေ စိတ်ကို မွေးဖွား ဖို့ရန်လည်း အရမ်းကို အသုံး ဝင်သည့် ကိစ္စလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံ ရလျှင် မိသား စုကို ချက်ချင်း ပြလိုက်ပါ။
အယ်လ်ထ ရာဆောင်း ရိုက်ထားသည့် ဓာတ်ပုံကို ပိုင်ဆိုင် ထားသည့်သူ အများကြီး ရှိပါသည်။ ဒါကြောင့် စစ်ဆေး ရတာကို မျှော်လင့် နေသူလည်း ရှိကောင်း ရှိနိုင် ပါသည်။ အဲ့ဒီ ထဲမှာမှဗီဒီယိုဖြင့် ပုံရိပ် ကိုလည်း ရယူ နိုင်သည်။ အတော် များများသော သားဖွား မီးယပ် ဌာနများ၌ အမှတ် တရ အနေဖြင့် ဓာတ်ပုံ ထုတ်ပေး ပေမဲ့လည်း စစ်ဆေးမှု လုပ်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း အတွက် ဆရာဝန် ၏ လွတ်လပ်သော စစ်ဆေးမှု ဖြစ်ခြင်း ကြောင့် သားဖွား အထူးကု ဆရာဝန်ကို သေချာ မေးကြည့် ထားကြ ရအောင်။
အယ်လ်ထ ရာဆောင်း ဓာတ်ပုံ လိုချင်လျှင် သားဖွား မီးယပ် ဌာနကို ရွေးချယ်သည့် အချိန် ကတည်းက ရနိုင်လား မရနိုင် ဘူးလား ဆိုတာကို သေချာစွာ စစ်ဆေး ထားရ ပါမည်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကို သေချာ မသိပဲ သွားနေကျ သားဖွား မီးယပ် ဌာနကို ရွေးချယ် မိထားလျှင် ကိုယ်က ဆေးရုံ မသွား လည်းပဲ အယ်လ်ထ ရာဆောင်း သီးသန့် ရိုက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင် ပေးသော ဆေးရုံများလည်း ရှိသောကြောင့် အင်တာ နက်ထဲ၌ ရှာကြည့် ရအောင်။
ဤဟာ သည်လည်း ဆေးကုသ ဝန်ဆောင်မှု ပေါ်၌ မူတည် ပါသည်။ ပုံမှန် 2Dပုံ ဆိုလျှင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် အနေနှင့် ပရင့်ထုတ် ပေးသည့် နေရာများ ရှိပေ မဲ့လည်း 3D ဓာတ်ပုံတို့ ဗီဒီယိုတို့ ဆိုလျှင်တော့ ပိုက်ဆံ ယန်းထောင် ကျော်ကျ သင့်မှာ ဖြစ်ပါသည်။